Home News Duqa Muqdisho oo Dayacay Muqdisho&Shirar Iyo Xaflado Joogta Ah oo Dhaqaalaha Gobolka...
Duqa Muqdisho oo Dayacay Muqdisho&Shirar Iyo Xaflado Joogta Ah oo Dhaqaalaha Gobolka Lagu Isticmalay
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho C/raxmaan Cismaan Yariisow ayaa shaqadii laga sugayey inuu ka qabto gobolka Banaadir wuxuu ku bedalay shirar iyo xaflado aan dhammaad lahayn kuwaasi oo is daba jooga ah dhaqaalana lagu burburiyo.
Taniyo marki xilka gudomiye nimo lo magacabay Eng yariisow aya so saray Wareegtoyin oo kaliya iyado shacabka ku dhaqan Muqdisho ay kaga fadhiyeen isbadal Muuqda balse arinku aya umuuqda mid an waxba isdoorin oo ficilkiisu fadhiid yahay,Shacabka Muqdisho aya maalin waliba arka misane maqla duqa Muqdisho aya xaflad halkasi kaga qeyb galay ama asiga ayaba dhigtay.
Shaqooyin badan oo gobolka ah ayaa is dulsaaran dad badan aya ka cabanaya shaqoyin ay ubaahan yihin in loo fududeeyo oo lo qabto balse waxa lagu wargaliya in ay soo laabtaan iyado shaqsiga afgaradka sameeya ama LAALUSHKA bixiya loo fududeeyo wana dhaqan an joogsan oo sii kobcay.
Muqdisho qeybo ka mid ah Kooxda al Shabaab aya awaamir kuso rogaya waxa ayna degmooyin dhowr ah dadka ku dhaqan farayan waxyaabaha aysan jecleysan iyado dhalinyarada degmoyinkasi la cadaadinayo,arimahassi oo dhan duqa Muqdisho waa uu dayacay.
Shaqaalaha gobolka ayaa sidoo kale waxay ka cabanayaan mushaar la’aan iyadoo la ogyahay in gobolka maalinle dhaqaalaha ugu soo xarroodo.